‘पोई पर्‍यो काले’को दर्शक कति ? « Kakharaa
‘पोई पर्‍यो काले’को दर्शक कति ?
१५ कात्तिक, काठमाडौं । दिपावलीको अवसर पारेर गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘पोई पर्‍यो काले’ले दर्शकको माया पाउन सफल भएको छ । फिल्मले रिलिजका दिन देखि बुधबारसम्म हलमा राम्रो दर्शक पाएको निर्माता किरण नेपालीले जानकारी दिए ।
शुक्रबार रिलिज भएको फिल्मको प्रतिक्रिया बुझ्न शनिबार, आइतबार र सोमबार अभिनेत्री पुजा शर्मा काठमाडौका केही चलचित्र भवनमा पुगेकी थिइन् । शर्मा चलचित्रभवनमा पुग्दा उनीसँग सेल्फी खिच्नेको भिड लागेको थियो । चलचित्र भवन भ्रमणका समय फिल्मको बारेमा आफुले राम्रो प्रचिक्रिया पाएको अभिनेत्री शर्माले बताइन् ।
शिशिर राणाको निर्देशन रहेको फिल्मले सेन्सर बोर्डबाट युनिभर्सल प्रमाणपत्र पाएको थियो । मानिसको बाहिरी रुप हेरेर राम्रो नराम्रो भनिने गलत सोच राख्न नहुने भन्ने सन्देश बोकेको फिल्ममा पुजाको अलवा सौगात मल्ल, आकाश श्रेष्ठ, श्रृष्टि श्रेष्ठ, सोहित मानन्धर लगायतको अभिनय रहेको छ ।
रेड बर्ड प्रोडक्शनको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म किरण नेपालीको प्रस्तसतिमा दीपक मनाङ्गे र सरोज नेपालीले मिलेर बनाएका हुन् । अमलादेवी राई कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा शिव ढकालको छायांकन,अर्जुन पोखरेल र पुरुषोत्तम न्यौपानेको संगीत, रामजी लामिछाने र कमल राइको नृत्य समेटिएको छ ।